China mobile phone accessories bag ifektri abakhiqizi | Hong Bang
Isikhwama se-ziplock sokuma siyisitayela esithandwayo kakhulu semakethe ngoba lolu hlobo lokupakisha luyahlukahluka futhi lusebenza futhi luyakhanga. Njengoba igama ngokwalo liphakamisa, lezi zikhwama ziyakwazi ukusukuma kuyo yonke indawo eqinile. Inekhono elihle lokubonisa ishelufu futhi banganciphisa izidingo zesitoreji futhi bandise isikhala seshalofu. Imvamisa, isikhwama sokusukuma sisetshenziswa kakhulu ku-snack, i-condiment, ubucwebe, itiye noma ikhofi, ukudla kwezinja, ukudla kwezilwane, nokupakishwa kwezinsiza zefoni.
Izici ze- Isikhwama se-Ziplock
Isikhwama sePet food Stand Up sikhwama senziwa kusuka ezingxenyeni eziningana zezinto zokuvimbela ezingahlukaniswa ngamaqembu amakhulu amathathu, ahlangana ukuletha isikhwama ngezici eziqinile nezimelana nokubhoboza. Lawa maqembu ama-3 yilawa:
Ukuphepha nekhwalithi ephezulu kuzoba yisimiso sethu sokuqala. Yonke imikhiqizo yethu yenziwa ngezinto zebanga lokudla okusho ukuthi ifilimu esiyisebenzisayo, uyinki nomugqa wokukhiqiza ukuphepha okungu-100% kuwo wonke umuntu omdala ngisho nengane. Ngaphezu kwalokho, siqinile ngekhwalithi okusho ukungabekezeleli nhlobo kwanoma yiluphi uhlobo lokuyekethisa olubonisa ekwakhiweni okuqinile, ukuqina komoya nokuphrinta okucacile. Ukupakisha umdlalo obucayi futhi ophelele ngokufunwa kwamakhasimende kuyohlale kuyinjongo yethu.
Isici se-Stand Up Ziplock Bag
Iwindi litholakala kalula
Isisindo Esilula Nokuthwala
Awukho Umdlalo Olinganiselayo Okulula Ukuma
Bpa, ukuhola, i-PVC, i-phthalate-free
Langaphambilini Isikhwama sokudla kwezilwane ezifuywayo
Olandelayo: Izikhwama zespout